कस्तो छ भिभोको भी २३ सिरिजको स्मार्टफोन ? | Ratopati
कस्तो छ भिभोको भी २३ सिरिजको स्मार्टफोन ?
भिभो लाईयसको क्यामेरा प्रविधिले अन्य स्मार्टफोनहरू भन्दा भिन्न बनाएको छ । हालै नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको भी सिरिजले मोहक तस्वीरहरू, भिडियोहरू, अल्ट्रा–वाइड ल्यान्डस्केपहरू, सेल्फी खिच्ने कम्पनीले बताएको छ ।
भी२३ फाइभजीमा आई अटोफोकस रकस्टुमाइज्ड जेएनभी सेन्सरको साथ ५०एमपी पाट्र्रेट सेल्फी प्रयोग गरेर हाइपर–क्लियर पाट्र्रेट÷तस्वीर खिच्न सकिन्छ । स्मार्टफोनमा डुअल टोन स्पटलाइट र अगाडि एआई एक्स्ट्रिम नाइट पाट्र्रेटरहेको छ । जसले अँध्यारो वातावरणमा एकदमै स्पष्ट रक्लियर शटहरू क्लिक गर्न सक्छ ।
भी२३ फाइभजीको ट्रिपल रियर क्यामेरा मोड्युलको बारेमा कुरा गर्दा, यसमा ६४ एमपी जीडब्लू १ सुपर–सेन्सिङ क्यामेरा, ८ एमपी वाइड–एंगलक्यामेरा र २ एमपीम्याक्रो क्यामेरासँगै सुपर नाइट मोड छन् । यी फिचरहरुको साथ सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले सोशल मिडिया पोष्ट गर्ने तस्वीरको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन ।
भी २३ ई भिभोले सार्वजनिक गरेको एक सर्वोत्कृष्ट मोडल हो । यस स्मार्टफोनमा ५० एमपी अटोफोकस पाट्र्रेट सेल्फी क्यामेरा रहेको छ । जसलाई हाल बजारमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । भी २३ ई माआइसोशेल ३.० छ । जसले प्रकाशको संवेदनशीलतालाई सुधार गर्छ । पछाडिको भागमा, भी २३ ई मा ६४ एमपी नाइट क्यामेरा, ८ एमपी सुपर वाइड–एंगलक्यामेरा र २ एमपीम्याक्रो क्यामेराको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ । यसको सुपर नाइट मोडले प्रकाश र छायाको सन्तुलनमिलाएर जीवन्त तस्वीरहरु कैद गर्दछ । भी२३ई मा स्ट्यान्डर्ड स्टेबिलाइजेसन पनि छ जसले भिडियो सिर्जनाकर्ताहरू, भ्लगरहरूलाई हल्लिएको र ब्लरबाट मुक्त भिडियोहरू शूट गर्न अनुमति दिन्छ ।
जावाले ल्यायो ७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पर्ने फोर्टी–टु स्पोर्ट्स स्ट्राइप मोटरसाइकल
यामाहाको नयाँ बाइक एफ जेड एक्स १५० नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
रियलमीद्वारा सबैभन्दा छिटो चार्ज हुने स्मार्टफोन सार्वजनिक
आजदेखि कनेक्ट आईपीएसको इलेक्ट्रिफाईङ अफर, इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्न सकिने